အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတိုက္အတြင္း တ႐ုတ္ခရီးသြားဧည့္သည္ႏွစ္ဦး စကားမ်ားရန္ျဖစ္ - Mandalay In-depth
အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်နှစ်ဦး စကားများရန်ဖြစ်
Mg Tar အောက်တိုဘာ 11, 2019 9:02 ညနေ 0
အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်တွင် အောက်တိုဘာ(၁၁)ရက် နံနက်(၁၁)နာရီက တရုတ်နိုင်ငံသား ခရီးသွားဧည့်သည်နှစ်ဦး ပခုံးချင်းတိုက်မိရာမှ စကားများကာ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မန္တလေးမြို့ အမရပူရမြို့နယ် ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်၊ တောင်သမန်းအင်းအနီးရှိ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်သည် ရဟန်းသံဃာ ထောင်နှင့်ချီကာ သီတင်းသုံးနေသော ကျောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည် အများအပြားမှာလည်း ယင်းကျောင်းတိုက်သို့ နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်လျှက် ရှိသည်။
အောက်တိုဘာ(၁၁)ရက်က နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဝန်ဆောင်မူ လုပ်ငန်း၏ ကြီးကြပ်မူဖြင့် ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦး ဦးဆောင်သော တရုတ်နိုင်ငံသား ခရီးသွားဧည့်သည်(၂၀)ဦးသည် မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း လေ့လာကြည့်ရှု့နေစဉ် အသက်(၇၀)ကျော်အရွယ် တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့် အသက်(၅၀)ကျော်အရွယ် တရုတ်နိုင်ငံသူတို့ ပခုံးချင်း တိုက်မိရာမှ စကားများပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်တွန်းထိုးမူ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု အမရပူရမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရး တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်သို့ လာရောက်လည်ပတ်ပြီး သံဃာတော်များအား လှူဒါန်းနေသည့် တရုတ်နှင့် အရှေ့တိုင်းမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များ။ Photo – Si Thu
ထိုသို့ အချင်းချင်း စကားများကာ တွန်းထိုးရာမှ အမျိုးသားကြီးတွင် ဝဲတံတောင်၊ ယာလက်မောင်း၊ ဝဲရင်အုံ၊ နောက်ကျော၊ ဦးခေါင်းတို့တွင် အနည်းငယ်ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကာ အမျိုးသမီးကြီးတွင်လည်း ယာခြေသလုံးဖုယောင် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့နောက် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရရှိခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ခရီးသွားဧည့်သည် နှစ်ဦးကို အမရပူရမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကာ ဆေးကုသမှုပေးခဲ့ပြီး ဆေးရုံအရောက်တွင်မူ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ညှိနှိုင်းပြေလည်မူ ရရှိခဲ့ပြီး အမူဖွင့်တိုင်တန်းခြင်း မရှိကြောင်း အမရပူရမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် တရုတ်နှင့် အရှေ့တိုင်းမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များ။ Photo – Mg Min Maw
အထက်ပါဖြစ်ရပ်မှာ ကျောင်းတိုက်အတွင်း ခရီးသွားဧည့်သည် များပြားချိန် အခန့်မသင့်၍ စကားများခြင်းဖြစ်ကာ ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်များမှလည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်သည်ဟု မန္တလေးမြို့ခံ ဝါရင့်ဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်ရန်ဖြစ်တာပါပဲ။ အခန့်မသင့်လို့ ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါ။ တရုတ်ခရီးသွားမို့ ဖြစ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အရင်ကဆို အနောက်နိုင်ငံသား ခရီးသွားတွေလည်း ဒါမျိုးတွေ ရန်ဖြစ်ဖူးတာပဲ။ ပြေလည်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလအတွင်းကမူ အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်အချို့ ဆူညံစွာအော်ဟစ်၍ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်များက ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် ဆူညံခြင်းမပြုရန် သတိပေးစာများ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်။
အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်သို့ လာရောက်လည်ပတ်ပြီး သံဃာတော်များအား လှူဒါန်းနေသည့် တရုတ်နှင့် အရှေ့တိုင်းမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များ။ Photo – Mg Min Maw
တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်အချို့၏ စည်းကမ်းမဲ့သော အပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသခံအချို့က ဝေဖန်မူများ ရှိနေသော်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူအများစုကမူ ခရီးသည်အပေါ် အပြစ်မြင်ရန် မသင့်ဘဲ ဝန်ကြီးဌာန၏ စိစစ်ကြပ်မတ်မူ အာနည်းချက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“အနောက်နိုင်ငံ ခရီးသွားတွေ မလာတဲ့အချိန်မှာ သူတို့လာနေလို့ မန္တလေးက လူနှစ်သောင်းလောက် အလုပ်အကိုင်ရနေတာ။ တကယ်တမ်းဆို ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာနက လူတွေက ဒီထက်ပို အလုပ်လုပ်ရမှာ။ တချို့ကိစ္စတွေက သူတို့အလုပ်မလုပ်လို့၊ စိစစ်ကြပ်မတ်တာမရှိလို့ ဖြစ်နေတာ”ဟု မန္တလေးမြို့ခံ ဝါရင့်ဧည့်လမ်းညွှန်က ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလအတွင်းက အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်အချို့ အချင်းချင်း တွန်းထိုးနေကြစဉ်။ Photo – Si Thu .
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းက တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားစသည့် နိုင်ငံများမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဗီဇာကိစ္စ ဖြေလျှော့ပေးမူများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် မန္တလေးသို့ တရုတ်နိုင်ငံသား ခရီးသွားဧည့်သည် ဝင်ရောက်မူ သိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်။ မန္တလေး တံတားဦးလေဆိပ်မှတဆင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည် ဝင်ရောက်မူ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာက (၄၂၀၀)ကျော်သာ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် (၃၁၆၀၀)ကျော်အထိ ဆယ်ဆနီးပါး မြင့်တက်လာကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလအတွင်းက အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်အချို့ အချင်းချင်း တွန်းထိုးနေကြစဉ်။ ဓါတ်ပုံ – Si Thu .
အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် တရုတ်နှင့် အရှေ့တိုင်းမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များ။ ဓါတ်ပုံ – မောင်မင်းမော်။